“Mesut Ozil wuxuu doonayaa inuu sii joogo Arsenal” – Gool FM
“Mesut Ozil wuxuu doonayaa inuu sii joogo Arsenal”
Liibaan Fantastic October 21, 2017
(London) 21 Okt 2017 Warar cusub ayaa ka soo baxaya mustaqbalka kubadd abuuraha kooxda Arsenal ee Mesut Ozil.
Laacib kaan ayaa lala xiriiriyay kooxo ay ku jirto Man United laakiin dad u dhaw Ozil ayaa xaqiijiyay inuusan diyaar u ahayn ka tagista Arsenal.
Waxa uu beeniyay shaqsigaan in Ozil uu dalbaday mushaar qaali ah oo gaaraya ilaa 300 kun oo Ginni isbuucii.
“Mesut kama helin Arsenal dalab heshiis kordhin ah, waxaa jiray wadahadal loogu kordhin lahaa mushaarkiisa laakiin waxaa u danbaysay bishii Maarso, ilaa waqtigaas ma jiraan wax la dhameeyay” ayuu yiri saaxiib u dhaw Ozil oo la hadlay The Sun.
“Waqtigaas waxaa shaki badan la galiyay mustaqbalka Wenger ee kooxda sidaas ayeeyna u hakadeen wadahadaladii, ma jiro dalab uu ka helay Arsenal ama kooxo kale, ma doonayo inuu ka mid noqdo ciyaartoyda ugu mushaarka badan Premier League, taasi ma ahan hadafkiisa”.
“Mesut wuxuu ku adkaysanayaa inuusan jirin laacib ka mid ah kooxda oo uu u sheegay inuu ku biirayo United, ma uu garanayo in Manchester ay doonayso isaga iyo inkale”.
“Wuxuu doonayaa inuu sii joogo Arsenal, waqti dhaw ayuu guri ka iibsaday London”.
“Oo Guulaheyga miyaan dhibbane u ahay.”. Jose Mourinho
Harry Kane oo iska fogeeyay u dhaqaaqida Real Madrid